ရခဲမွန်မြတ်လူ့ဘ၀ | အမေးများအတွက် အဖြေလွှာ
ကောင်းသောအကျင့် December 10, 2009
Filed under: ရခဲမွန်မြတ်လူ့ဘ၀ — amayaphay @ 8:52 am
လောကမှာလူဖြစ်လာရခြင်းတွင် မည်သည့်အကြောင်းအရာသည်ဘယ် အကြောင်း အရာအားလုံးရဲ့အထက် အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပါသနည်း?
မိမိ တမလွန်မှာ ဘယ်ကိုသွားမှာလဲဆိုသည့်အကြောင်းအရာက အရာအားလုံး ရဲ့အထက် အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပါသည်။ မိမိ၏ ပညာရေး၊ စီးပွါးရေးနှင့် လူမှုရေး တို့ကိုမလုပ်ရပါဟု မဆိုလိုပါ။ ထိုအရာတို့ကိုလုပ်ဆောင်ရင်း တမလွန်အရေးကို ဦးစားပေးဖို့ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သေခြင်းတရားသည် အရွယ် မရွေးပါ။( မာ ၈း၃၆၊ သု ၂၇း၁၊ မ ၆း၃၃)
ဘုရားက လူသားများကို ဖန်ဆင်းထားသည်ဆိုလျှင် လောက၌ ရုပ်ဆိုး၊ ရုပ်လှ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အကောင်း၊ အဆိုး၊ မညီမျှမှုများ အဘယ့်ကြောင့် ရှိနေရပါသနည်း?
ဥစ္စာပေါ၊ ရုပ်ချော၊ ဂုဏ်ပကာသနရှိသူတိုင်း စစ်မှန်သော သုခချမ်းသာရှိပြီဟု ဆိုနိုင်ပါသလား။ စစ်တမ်းတစ်ခုအရ လူအများစုတွင် ကောင်းမွန်နှစ်ချိုက်စွာ အိပ်ပျော်သူများသည် အလုပ်လုပ်သူများသာဖြစ်ပြီး ချမ်းသာသူအများစုမှာ ၄င်းတို့ ချမ်းသာသည့် အတိုင်း အတာအလျှောက် စိုးရိမ်မှုရှိသည့်အတိုင်း အိပ်ပျော်ခြင်း အိပ်မပျော်ခြင်း ရှိကြပါသည်။ စစ်မှန်သောသုခချမ်းသာသည် မျက်မြင်ရသည့် အပေါ်တွင်မမူတည်ဘဲ မျက်မြင်မရသော လူတို့၏ မနောအပေါ်တွင်မူတည်ပါသည်။ ( ဒေသနာ ၅း၁၀၊ ၆း၇)
Filed under: ရခဲမွန်မြတ်လူ့ဘ၀ — amayaphay @ 8:47 am
လူသားတိုင်း တမလွန်ဘဝ၌ကောင်းရာဘုံသို့ရောက်ဖို့ရန်အတွက် ဘာကို သိဖို့လိုအပ်ပါသနည်း?
စစ်မှန်သောဘုရားကို သိဖို့လိုအပ်ပါသည်။ သူသည် ဖန်ဆင်းရှင်နှင့် မေတ္တာရှင်ဖြစ်ပြီး လူသားတိုင်း အပယ်ငရဲမှ လွတ်၍ သမ္မာတရားကို သိဖို့ရန် အလိုရှိ ပါသည်။ အဘယ်လူသားတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ ငရဲသို့ရောက်ဖို့ရန် အလိုမရှိပါ။ သားသမီးတိုင်းကို မိဘ တိုင်းက အသက်ပေးသည့်တိုင်ချစ်တတ်သကဲ့သို့ ယုတ်စွအဆုံး တိရိစ္ဆာန်များပင် မိမိ၏သားသမီးကို အသက်ပေးကာကွယ်တတ်ကြပါသည်။ အနန္တမေတ္တာရှင်ဟုအမည်ရသော ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားဆိုလျှင် သူဖန်ဆင်းထား သောလူသားတိုင်းတို့အတွက် အဘယ်ဆိုဖွယ်ရာရှိပါမည်နည်း။ ထို့ကြောင့် ထိုဘုရားရှင်ကို ရှာဖို့နှင့် ထိုဘုရား၏ တရားတော်ကို သိဖို့လိုအပ်ပါသည်။
(၁ တိ ၂း၎၊ ဟေရှာယ ၅၅း၆-၇၊ ယေရမိ ၂၉း၁၃)